အတ္တတွေဖြုတ်ကြ! ~ ဒီမိုဝေယံ
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့မှ ယနေ့ ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့အထိ ကျွန်တော်ကျော်သူနှင့် ဇနီးဖြစ်သူရွှေဇီးကွက်တို့သည် အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မြှင့်တင်ပေးသော၊ မြန်မာ့လူမှုရေး သမားများကို ဂုဏ်မြှင့်ပေးသော၊ မြန်မာကို ကမ္ဘာကသိရှိအောင် ကြိုးစားမြှင့်တင်ပေးနေသော မြန်မာပြည်သူ လူထုတို့နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော “ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်” အဖွဲ့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဤတွင် မြန်မာပြည်သူလူထု တို့သည် ဗုဒ္ဓ၏ ဆုံးမသြဝါဒအတိုင်း ကုသိုလ်ရှင်၊ ပါရမီရှင်၊ ဒါနရှင်များ ဖြစ်ကြရန် ကြိုးကုပ် အားထုတ်မှုများသည် အတိုင်းထက်လွန်နေသည်ကို ကျွန်တော်မြင်တွေ့မိတော့သည်။
ကောင်းသောမှတ်တိုင်ဟု ဆိုရာတွင်လည်း ဘုရားကြိုက်သော ဓမ္မမှတ်ိုင်ဖြစ်ဖို့လိုသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ အမေရိကန်လူမှုရေးခရီးစဉ်တွင် လူမျိုးပေါင်းစုံတို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်။ အားလုံး တို့သည် စေတနာထက်သန်မှု၊ ဒါနထက်သန်မှု စသည့်မြန်မာပီသမှုများကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် . . . ကျွန်တော် အထက်တွင် ဖော်ပြရေးသားခဲ့သော သူ့ထက်ငါ အလုအယက် ပေးဆပ်လိုမှုများကို မြင်တွေ့ မိရသည့်အခါများကို ကြုံတွေ့ရခဲ့သည်များလည်းရှိသည်။ သူ့အဖွဲ့၊ ငါ့အဖွဲ့၊ သူ့အုပ်စု၊ ငါ့အုပ်စု၊ သူ့ကျောင်း ငါ့ကျောင်းစသည့် “ငါ” မပြုတ်မှုများကို မြင်တွေ့ရသော် များစွာစိုးရိမ်မိခဲ့ရသည်များလည်း ရှိခဲ့ရသည်။ စစ်မှန်သောချမ်းသာမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုချင်ပါက “ငါ” ဟူသော “အတ္တ” ကို ဖြုတ်ရမည် မဟုတ်ပါလား။
အထူးသဖြင့် မိမိကိုယ်ကို လူမှုရေးသမားဟု အမည်ခံထားသော လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ လုပ်ကိုင် နေကြသော လူမှုရေးသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့် … နာမည်ကြီးအောင် လုပ်ယူလို့မရ၊ စီးပွားဖြစ်အောင် လုပ်လို့မရ၊ ဂုဏ်သိက္ခာတတ်အောင် လုပ်ယူ၍မရ၊ လူမှုရေးကို ခုတုံးလုပ်ကာ ကိုယ်ကျိုးရှာ၍ မရကြောင်း သိရှိထားဖို့လိုသည်။ မိမိ၏ ဖြူစင်သော စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ မုဒိတာ၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ စသည်တို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ လူမှုရေးဟုဆိုရာ၌ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မိမိနိုင်သလောက်ဝန်၊ မိမိထမ်းနိုင်သော အင်အား တို့နှင့် စုစည်းပေးဆပ်ကြဖို့သာ လိုအပ်သည်။ လူတစ်ဦးချင်းမှ အစုအဖွဲ့လေးများ၊ အစုအဖွဲ့လေးများမှ အုပ်စုကြီးများ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဆပ်ကြပါမှ လူ့လောကကြီး သာယာစိုပြေ ငြိမ်းချမ်းစေမည်ဖြစ်သည်။ ဝိုင်းဝန်းကူညီ တွန်းအားပေးကြသော်ငြား မိမိတို့ရဲ့ဦးတည်ချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်များ တူညီမှုများ ကိုက်ညီမှု၊ ထပ်တူကြဖို့ လိုအပ်သည်.။
ဝိုင်းဝန်းကူညီတွန်း အားပေးကြသော မိမိတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်များသည်လည်း တူညီမှုများ ကိုက်ညီမှုများ မရှိပါက မိမိတို့ဧ။် မှတ်တိုင်၊ ပန်းတိုင်သို့ ရောက်မည်မဟုတ်ပေ။
မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၊ မည်သည့်အသင်းအဖွဲ့၊ မည်သည့်ကျောင်းကိုမျှ မရည်ရွယ်ပါကြောင်း နှင့် လူဟူသော လူသားတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ဓမ္မနှင့်အဓမ္မ လွန်ဆွဲမှုများအား ရုန်းကန်လွတ်မြောက် စေလိုသော၊ ဖြူစင်သောစိတ်ဆန္ဒဖြင့် အဖြူထည်သက်သက် အတွေးဖြင့် ရေးသားခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် တေးရေး/ဆို ကိုရဲလွင်၏ “အတ္တဖြုတ်ကြ” သီချင်းခေါင်းစဉ်အား ခွင့်မတောင်းဘဲ သုံးခဲ့ခြင်းကို ဝန်ခံရပါ တော့သည်။